Ny fiara fitateram-bahoaka Kayseri dia nitondra mpandeha 135 tapitrisa
Kayseri Metropolitan Munisipaly nitondra olona manodidina ny 2019 tapitrisa tamin'ny taona 135 tamin'ny fitateram-bahoaka tao afovoan-tanàna. Metropolitan Municipality Transportation Inc. fitateram-bahoaka eo ambany fanaraha-maso ny mpandeha 135 tapitrisa tamin'ny taona 69 [More ...]
Ny Ben'ny tanànan'i Mersin Metropolitan Vahap Seçer dia nihaona tamin'ireo mpandraharaha tao amin'ny fikambanana tamin'ny fivoriana nokarakarain'ny filohan'ny Mersin Industrialists and Businessmen Association (MESİAD) Hasan Engin. Ny famaritana ny fampiasam-bolan-dry zareo ao Mersin [More ...]
Niresaka tamin'ny lahatenin'ny Seraseran'ny Seranam-piaramanidina Gayrettepe-Istanbul, izay natao tamin'ny fanatrehan'ny filoham-pirenena Recep Tayyip Erdoğan, ny minisitra Turhan ankehitriny dia ohatra tsara amin'ny ohatra momba ny famatsiam-bola nataon'ny Ministera amin'ny rafitry ny lalamby an-tanàna. [More ...]
Maps of Antray - Antalya Tram
2010 dia napetraka tany Antalya nataon'ny Kaomina Metropolitan Antalya. Ny tsipika Etap Light Rail dia manomboka amin'ny faritr'i Fatih ary mifarana amin'ny faritry ny gara Meydan. Andalana manodidina ny 1 km. Mpandeha 11 [More ...]
Sarintany Metro Essen: Betsaka ny olona mahita an'i Essen ho renivohitra angovo. Trano misy orinasan-jiro roa lehibe, E.ON SE sy RWE AG. Angamba tamin'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX [More ...]
Ankara Metro Stations sy Flight Time Map: fitateram-bahoaka fanompoana ao Ankara, renivohitr'i Tiorkia, izay Ankara Metropolitan Monisipaly Tale Jeneraly ny hambom-pon'ny lalamby fitaterana Network. Fitaterana lakana Ankara efa misy [More ...]
Denizli Izmir Sarintany fiaran-dalamby sy sarany tapakila: Izmir Basmane Denizli fiaran-dalamby dia miasa amin'ny TCDD fitaterana. [More ...]